INTEE IN LA KARIYO BONDUELLE HADHUUDHKA: SIDA LOO KARSADO NOOCYADA KALA DUWAN EE RUGTA GURIGA IYO MUDADA INTEE LE'EG AYAY QAADANEYSAA? - KHUDRADDA
Qof kastaa wuu ogyahay in alaabta qasacadaysan ee la dhammeeyey oo la mid ah magaca, luminta saxanka guriga lagu kariyey. Waqti ka dib, magaca ayaa helay sumcad weyn sida hadda oo hadda magaca "Bonduel" waxaa lagu magacaabaa dhammaan noocyada sonkorta.
Dalagyada ka mid ah - meel saddexaad, oo ka dambeeya sarreenka iyo bariiska ee caanka ah. Daqiiqda iyo dhirta waxaa laga sameeyey abuurka galleyda, iyo hadhuudhuna sidoo kale waa la ilaaliyaa. Sweetcorn, oo loo yaqaan 'Bonduelle', oo aan ku dhejin meelaheeda sare ee noocyada kale ee siriyadan, faraha ka sii badanaya dhiggooda dhadhanka iyo guryaha nafaqada.
Kala duwan oo sonkorta hore u bislaadaan, ee 80-90 maalmood laga bilaabo wakhtiga caleemaha koowaad. Celceliska dhererka warshad lagu beeray waa 2.5 m. Miro kaas oo dhererkoodu gaaro 15-20 cm ayaa lagu sameeyaa qaab ahaan silsilad, taas oo ah nooc kasta oo hadhuudh ah. Kochanchik oo kareebay miisaankeedu yahay 160 illaa 190 g. Maaddada siriyaalkani waa mid aad u fiican oo macaan leh.
Marka lagu daro dhadhanka aadka u fiican, dhaqanka dalagga waxaa lagu qiimeeyaa guryaha dawooyinka. Cunto khudbadeed ah, dabiicigu wuxuu bixiyaa xaddi badan oo fiitamiin A, H, C, D, K, PP, B kooxaha (B1, B4, B9), iyo sidoo kale magnesium, sodium, copper, potassium, selenium, birta, fosfooraska. Dhererka waxaa ku jira carotene beta, choline, carotenoids, noocyo kala duwan oo asiidh.
Caawin Dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan marmar inay cunaan hadhuudh for waayeelka, si looga hortago atherosclerosis.
Qadar yar oo miro la kariyey ama la ilaaliyey maalin kasta waxay kordhin doontaa codka, xoojinta xididdada dhiigga, hagaajinta shaqada wadnaha, kaadiheysta iyo hagaajinta cuntada. Haddii ay jiraan wax cillad ah dheefshiidka oo ay weheliso calool-xumo iyo cawaaqibkeeda, waxaa lagu talinayaa in la cuno 100 g oo ah khudradda la kariyey.
Cuntada ayaa si gaar ah qiimo leh u leh hilibka., sababtoo ah waxa ku jira qadar aad u badan oo si sahlan oo dheecaan leh oo si dhakhso ah loo nadiifiyo borotiinka. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in si sax ah loo daaweeyo kulaylka iyo in aan lumin maaddooyinka lagama maarmaanka u ah jirka.
Ka digtoonow jimicsiga bukaanka qaba cudurrada joogtada ah ee mareenka dheef-shiidka (gastritis, boog-garka).
Dadka qaba xinjirowga dhiigga oo kordhiya waa inay diidaan hadhuudh ay ku jirto xaddi badan oo fitamiin K ah, taas oo xoojisa geeddi-socodkan.
Buurnaanta, nafaqadu waxay ku talinaysaa in la tirtiro badeecadaas cuntada, sababtoo ah heerka calorie sare - 93kcal-100g.
Isku-daboolida shuruudaha dulqaadka shakhsi ahaaneed iyo muujinta dareen-celinta xasaasiyadeed.
Waa kuwee habboon in la doorto?
Kala duwanaanshaha khudradda macaamiisha ee suuqa iyo dukaamada waa mid taajir ah oo kala duwan. Dhammaan hadhuudhku waxay u muuqdaan kuwo isku mid ah, laakiin ha ku degdegin oo iibsan wax ugu horreeya ee isha ku haya. Si aan u dhicin wakhtigii lumay iyo lacag Markaad doorato cobs, waa inaad raacdaa xeerarka:
Kala duwanaansho waa waxa ugu horeeya ee u baahan in la fiiriyo. The ugu delicious - sonkorta, waxaa loo yaqaan "Bonduel". Boodhadhku waa cabbir dhexdhexaad ah, miro ayaa ah jilicsan oo dhadhan fiican leh. Haddii aad rabto inaad wax cuntid, oo aanad isku buuqin, waxaad u baahan tahay inaad raadiso hadhuudh aan la goyn karin oo ku taala rugta. Waxaa loo adeegaa la kariyey oo aan lagama maarmaan u ah saladhka iyo cuntada.
Taabashada sheyga waxaa lagu aqoonsan karaa qolof dhalaalaya, cagaaran iyo iftiin, stigmas yar oo qoyan. Waxaa lagama maarmaan ah in la furo caleemaha si ay u arkaan qaybta oo dhan, miraha ay tahay in ay noqoto mid yar, mid fudud iyo midab jaalle ah. Haddii, markaad taabatid ciddiyaha, maqaarka birta qarxa, iyo cabitaanka casaan-cadaanku u muuqdo, ka dibna tani waa hadhuudh cusub oo casri ah (waxaad ka heli kartaa halkan inta uu le'eg yahay iyo inta le'eg ee lagu kariyo hadhuudhka.)
Qaan-celinta waxaa lagu go'aamiyaa isbeddelka midabka iyo cufnaanta miraha, taas oo noqonaysa mid adag oo aan la macno ahayn inta lagu jiro sameynta istaarijka.
Qoraalka. Farshaxan adag oo leh hodan, midab jaalle ah ama midab liin leh ayaa ka hadlaya bisil, xitaa hadhuudh badan.
Qiyaas intee dhan oo loo kariyo hadhuudhkii hore, si ay u noqoto mid jilicsan oo casiir leh, halkan ka akhri.
Waa muhiim inaad awood u yeelatid inaad kala soocdo noocyada cuntooyinka oo laga bilaabo calafka. Noocyada quudinta ee loogu talagalay naaxinta xayawaanka waxay leeyihiin haraaga, dheddig iyo dhadhan aad u yar. Wanaagsan ee maraqa, suxuunta weelka iyo saloolada.
Maalinta la iibsanayo, koollada waa in la xalliyaa iyadoo la eegayo cabbirka isku midka ah ee xitaa wax karinta, nadiifinta wasakhda, xajmiga dhirta oo burburay iyo qaybo madow oo laysku haysto. Timaha jilicsan iyo caleemaha khafiifka ah waxay siin doonaan saxanka dhamaystiran ee casriyeynta iyo dhadhanka. Ka dib markii la sameeyo - si fiican u dhaq dhirta adoo biyo socda. Meelo badan oo qaas ah oo loogu talagalay in lagu yareeyo tirada qaybaha loo baahan yahay.
Cuntada caanka ah
Fursadaha karinta waxay ku xiran yihiin doorashooyinka dhadhanka ee karinta. Inta ugu badan ee loo yaqaan "classic" ee digsiga. Dadka qaarkood waxay jecel yihiin in ay ku dubtaan cunto kariyaal, mashiinka microwave, iyo xitaa qashin iyo dabayl.
Hooyo dhallinyaradu waxay inta badan xiiseeyaan diyaarinta noocyo sonkor ah, oo aad u faa'iido leh cunnuga cuntada.
Habka karinta ee sonkorta lagu daray
Cab digsi, oo leh derbiyo qaro leh, ka buuxi biyo kuna keen karkar.
Ku dar sonkorta si aad u karisid biyo, qiyaasta 1 qaado oo halkii litir oo biyo ah.
Khudaarta cagaaran ku shaqeeysid khariidad ku jirta weelka sugna kari. Markaa kadib markaad daboosho oo aad hoos u dhigtid kuleylka ilaa awoodda dhexe.
Waqtiga loogu talagalay, 15-20 daqiiqo, karkari maaddooyinka.
U diyaargarowga si sahlan ayaa loo hubiyaa foosto: haddii miraha la xoqo iyada oo aan la sameynin dadaal, markaa waxaad gaari kartaa. Maqaarka la karkariyay way adag tahay marka la qaboojiyo, markaa waxay u baahan yihiin in la cuno isla markiiba ka dib markii ay yaraadeen qaboojinta (macluumaad ku saabsan sida loo kaydiyo hadhuudhkii hore loo kariyey, akhriya maqaalkan).
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo fiitamiinada iyo asiidhyada amino, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo nidaamka heerkulka. Khudraddaas waxay haysaa dhismeyaal heer sare ah, heerkul joogto ah.
Muddada ay hawshu socoto waxay ku xiran tahay qaabdhismeedka iyo kala duwanaanta. Haddii hadhuudhku uu yahay sonkorta oo uusan aad u bislayn, markaa way sahlan tahay, sidaas awgeed waa inaad u fiirsataa waqtiga oo si adag u hoggaansamida habka lagu taliyay. Cobs waa in si buuxda loogu daboolo biyaha. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in si gooni ah loo soo celiyo khudradda furan si markaa wax loo karsado ay u dhacdo si siman.
Daawee oo dhaqi sida hore loo sharraxay.
Ku rid digsi biyo qabow.
Isku kari kari kadibna isku kari ilaa 10-15 daqiiqo daboolka xiran.
Si loo gaadho jilicsanaanta iyo jilicsanaanta hadhuudhka, ka tago cobs diyaar ah oo biyo ah, dabool daboolan, 5 daqiiqo oo kale. Ka soo bax biyaha, haddii, haddii lagu karkariyo caleemaha, ka dibna ka saari xuubyada (sida loo kariyo hadhuudhkii ku yaala dirka iyo inta aad u baahan tahay inaad karisid, waxaad ka heli kartaa halkan).
Si aad u ilaaliso kulaylka una muujiso dhadhanka miro, digsi, ka dib markaad ka soo saartid kariyaha iyo biyo daadi, ku duub shukumaan.
Fiiri fiidiyo ku saabsan cunto kariska Bonduelle:
Iyada oo ah waqti gaabis ah, waxaad karisaa badeecada mashiinka qafiifka ah:
Nadiifi oo si fiican u dhaq.
Iska yaree saliidda iyo saliidda.
Ku rid cobs ah on cagaarka, iyo sare - mar kale qolofka, sii wadida beddelka sare.
Hannaanka "bean", marka laga reebo, "karinta", "maraq" ama barnaamijyo kale oo isku mid ah.
Sida waafaqsan tilmaamaha, buuxi taangiyada rubuc, illaa calaamad, ka dibna rakibi shabakad khaas ah, oo dhegaha lagu dhaqo oo dhaqo.
Ka eeg cuntooyinka kale ee degdegga ah ee loogu talagalay wax lagu kariyo hadhuudh khudradda labanlaaban.
Sidee u adeegtaa oo u cunaa?
Dhaqan ahaan, saxanka waxaa loo adeegaa kulul. Waxaa jira dhawr fursadood oo faylal ah:
Ka dib marka la dhammeeyo diyaarinta, tababareyaasha dahabka ah waa in si taxadar leh loo sifoobo ama lagu rushaa milix aan qalafsaneyn.
Nooca karbuunta ah ee laga qaaday digsiga si dhakhso ah ayaa loo xaaqay subag la qaboojiyey.
Kaadi xaddiga loo baahan yahay ee subagga, ku shub weelasha yaryar, oo u diyaarso raashin aan waqti u helin in la qaboojiyo marka la cunayo.
Alaabada la dhamaystiray ee caanaha ama kareemka
Kuwa jecel inay tijaabiyaan, waad karin kartaa hadhuudh la dhammeeyey caano ama kareem. Afar qeybood waxaad u baahan doontaa:
caano la karkariyey - 125 ml;
kareem yar - 60 ml;
afar xabo oo hore loo kariyey;
subagga - 50 g;
burka burka - 1 tbsp;
khamri cad qallalan - 125 ml;
Isku dar kariimka kareemka iyo isku karkari.
Si taxaddar leh u kala saar midhaha iyo ku dar iyaga oo isku dar ah caano isku dhafan.
Karkari 10 daqiiqo.
Kaadi subagga, ku dar bur oo ku dar awoodda wadarta.
Walaaq maaddooyinka iyo kariyo 10 daqiiqo oo kale.
Ka dib markaa, ku shub khamriga kalluunka.
Karkari muddo 10 daqiiqo ah si aad u nadiifiso khamriga.
Dhamaadka geedi socodka ku dar milix iyo waxoogaa yar oo madow, basbaas hore loo sameeyey.
Immisa dowlado, cuntooyin badan oo cunto karis ah iyo noocyada fayl-galka. In Mexico - Kobartimadu waxay ka samaysan tahay liin lemon ku rusheeyaa cusboTaasi waxay siinaysaa saxanka asalka ah ee dhadhanka ah. Waxaa jira cuntooyin badan oo xiiso leh oo dhadhan fiican leh oo noocyo kala duwan oo salad ah iyo cunto fudud ah oo lagu daray maadada macaan ee macaan leh oo la kariyey oo ah nooc ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan.
Waxaa ka mid ah dadka jecel guryaha, caanaha dhirta ee xaaladaha farshaxanka waa caan. Maanta waa muhiim ma aha oo kaliya in la keydiyo lacagta, laakiin sidoo kale waa inaad hubisaa in ay tahay nooca sonkorta Bonduelle ee miiska, iyada oo aan lagu darin ama walxahaas.